RAHA MBOLA RAJOELINA NO MITONDRA DIA TSY HISY FAMPANDROSOANA ETO – MyDago.com aime Madagascar
Tsy misy afa tsy ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana Marc hoy ny Ct Ernest avy any Lalangina teny amin’ny Magro Behoririka androany no hampilamina ny firenena. Raha tsy misy filoham-pirenena voafidim-bahoaka hoy izy, eto dia hikorontana foana ny firenena, satria tsy misy olona to teny eto. Raha misy ny tatitra na fandaminana ataon’ireny olomboantendry ireny dia tsy misy mihaino izany satria tsy olomboafidy. Mifanipaka tanteraka hoy izy, ny ao anaty fitondrana ka izany no midika fa fanjakana efa ho rava. Nambaran’i Ernest fa ny lalana any amin’iny faritra Lalangina iny amin’izao fotoana izao, dia feno lavandavaka. Ny mpitatitra hoy ity mpanao politika ity, milaza fa tsy misy afa tsy ny filoha Ravalomanana Marc no afaka hanarina haingana izany. Raha misy koa ny tsy filaminana sy ny tsy fahavitan-dalana hoy izy, tsy misy ny fahavononana hiasa satria samy manao izay saim-pantany ny mpitondra sy ny vahoaka ho entina. Tsy hisy fampandrosoana eto raha mbola Rajoelina no mitondra. Ny filohan’ny fikambanan’ny ben’ny tanana eto Madagasikara Ralaiseheno Guy Maxime kosa dia nanambara fa amin’izao fotoana izao dia misy manahirana antsika amin’ny fanohizana ny tolona. Indraindray aza hoy izy, dia mahakivy mihitsy ny zavamisy. Ny zavatra tsapa anefa dia n’aiza n’aiza kaomina aleha dia milaza fa ny vahoaka hoe leo an-dRajoelina. Nitondra fanazavana mahakasika ny lahatsoratra nivoaka tamin’ny gazety iray mpiseho isan’andro ny tenany izay milaza fa « tsy hita ny filoha Ravalomanana Marc ». Raisina ho toy ny filohan’ny Repoblika ny filoha Ravalomanana Marc, hoy Guy Maxime, ka tsy maintsy fantatra izy rehefa mihetsika. Amin’izay maha filohan’ny Repoblika azy izay dia mbola manana ny lanjany izy eo amin’ny sehatra iaisam-pirenena. Olona mamaha izao krizy izao izy, ary olona mpifanandrina mivantana amin-dRajoelina, ka toy ny anakandriamaso ka fantatry izao tontolo izao. Namafisin’ity olomboantendry ity, fa ny filoha Ravalomanana Marc dia efa manomana ny fodiany eto an-tanindrazany. Mahakasika ny fahatongavan’ireo delegasiona avy amin’ny Sadc dia nambarany fa misy antony matoa nihemotra ny tombana ara-teknika saika ataon’izy ireo teto. Ingahy Simao hoy Guy Maxime, dia tomponandraikitra niaraniasa tamin’ny Chissano. Ny zavamisy anefa hoy izy, dia tsy fahombiazana no azo tamin’ny asa nataony. Ny olona tsy mahomby dia tsy ilaina amin’ny famahana ny krizy. Maro ny tantara, ny asa sy nytoetran’i Simao teto dia ny firaisana tsikombakomba tamin’ny Fat. Tsy azo itokisana ny olona tahaka izany. . Ny fanazavana diplomatika hoy izy, dia tsy hifanalabaraka ny Sadc. Mino ahy ianareo fa tsy maintsy tonga ny Sadc. Manantena isika fa tsy hivadika amin’ny zavatra napetrany ny Sadc, toy izany ny fihaonana tany Seychelle, izay nolazaina fa tsy maintsy atao ka dia tontosa izany. Tsy maintsyao anatin’ny 8andro hoy Guy Maxime, no tanterahina ny tombana ara-teknika. Andrasantsika ny fivoaran’ny raharaha amin’ny famahana ny krizy.
Auteur Solo Razafy*Publié le 10 octobre 2012 10 octobre 2012 Catégories Politique
7 pensées sur “RAHA MBOLA RAJOELINA NO MITONDRA DIA TSY HISY FAMPANDROSOANA ETO”
Ny namehina r i CT sy Cst Erneest dia Fampitsaharana aingana ity Tetezamitan ny mpanjakana sy Rajoelina ity.
Mamaitina ,Hilarion,Rasamimaka,Ernest ,Ravelonanosy ,Hilarion…. toa izany R’i Me Hanitra sy ny tariny ,Reasaka be …efa taona izao ….Aiza ..Htaharo androanay io tetezamita io.
Tena miala tsiny amintsika rehetra aho, miala fondro, fa heveriko fa tsy mety loatra ity manakiana lava ny sasany ity e!
Mitovy aminy ihany anie isika manoratra eto e ! Marina fa samy manao izay azony atao, anefa isika manoratra koa, raha ny tena marina anie mba tsy manao nainona na inona koa e !
R’izareo aza mba mihezaka manentana MIVANTANA . Ary marina ihany koa, fa be ny manao kobaka am-bava fotsiny : toy ny hoe mba efa inona ery anefa ny kabary no betsaka.
Noho izany, maninona moa, raha isika manentana ny Mpitarika ary ny Mpitarika manentana ANTSIKA ???
tsara ngamba raha mba omena « korazy » ihany r’izareo indraindray ???
Ny tena olana eto raha ny fijeriko, dia tsy mba misy resaka mitohy, fa samy mamoaka ny ao am-pony hatrany, tsy misy valiny ny resaka atolotry ny sasany, fa dia ny an’ny tena ihany !!!
Ny mba tiako homarihina amin’ny soso-kevitro esty ambony, dia tsy SANATRIA hoe entina hampiady ny miaramila, fa FANELANELANANA sy FIFAMPIRAHARAHANA no mba entina HIFAMPIDINIHINA.
nOHO IZANY DIA TENA MAMPORISIKA AN4IZY IREO AHO MBA HANDINIKA IO SOSO6KEVITRA IO, na ity soso-kevitra ity izany :
miala tsiny amin’ny mpitondra teny rana manitsy; tsy mpitondra akory rajolely fa mpijapy. tsy mbola notondra io ary tsy ahay an’izany. Ny mpanjanaka mpangorokare,a tompoko no mitondra, i rajolely mpanatanteraka baiko ohatra ny andevo fahiny.
Io rajolely io no teta tsy manaja ny maha olona fa na ny tenany aza tsy hajainy.
Marina tokoa fa miaramila manamboninahitra vitsivitsy izay anisan’ny mifehy ny fitondrana ny tafika no anisan’ny mampikatso ny tondro zotra noho ny tsy fanatanterahana ny andininy sasany.Ka noho izany dia tsara ho fantatra maninona ireo lohandohan’ny mpisorona ao amin’ny foloalindahy no manoetra ohatran’izao.Misy ratsy vitan’i Marc Ravalomanana ve tamin’izy ireo?
Arak’izany dia tsara tokoa raha manantona azy ireo ny ankolafy Ravalomanana miaraka amin’ireo HMF sy ny CNOSC mba hidinidinika sy hitafatafa amin’ireo miaramila ireo satria amin’izay dia:
a./ Tafaray latabatra izy ireo.Efa misy zavatra iraisana izay.
b./ Afaka manao ampamoaka ny tsirairay avy.Ny fo mamboroka hahalalana ny marina.
c./ Eo ny HMF sy ny CNOSC hanelanelana sy handrindra ny resaka.Mety ilaina io.
d./ Hamafisina ny hevitra itovizana ary ezahina ny hanalefahana ny fahasamihafana izay tsy maintsy resahina.
e./ Raisina an-tsoratra ny fifanarahana avoakan’ny marimaritra iraisana ary miniana ny hampihatra izany amin’ny rehetra arahina fanaovan-tsonia izay voahorona ara-peo sy ara-tsary hatramin’ny voalohany.
nialan,i hanitra fa ho ratsy ny tantara!mpamendrofendro sy mpamahandalitra avy eo @ranon,i behoririka sisa miteny eto!fianarana miresaka sy mandainga sisa sy teatra ny eto
Précédent Article précédent : RAVELONANOSY MAMITIANA : MISY PAIPAIK’ADY IO FIFIDIANANA IO
Suivant Article suivant : TSY MAINTSY MIOMANA AMIN’ NY FIFIDIANANA ISIKA